Qabrii Daar keessatti dhukkubni qaama-gubaa ka'uun dhaga'me - BBC News Afaan Oromoo
Qabrii Daar keessatti dhukkubni qaama-gubaa ka'uun dhaga'me
Goodayyaa suuraa Bookee busaa dhukkubicha dadabarsitu
Naannoo Somaalee Qabrii Daariitti dhukkubni qaama gubaa 'chiikungiwaa' jedhamu umamuu himame.
Dhukkubni maalummaan isaa haalaa adda hin bahiniifi naannoo Somaale jiraattoota magaalaa yaaddoo olaanaarraatti kufsee tureen namoonni hedduun dhukubsachusaanii odeeffannoon argame ni mirkanneessa.
Maalummaa dhukkubichaa ilaalchisee Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa naannoo Somaalee Dr Yusuuf Himum akka jedhaniitti, ''qaama gubaa 'chiikungiwaa' jedhama. Innis vaayirasii chiikungiwaa jedhamuufi bookee busaatii darbuudha'' jechuun BBC'tti himaniiru.
Fangasiin bookee busaa %99 ajjeesu qorannoon argame
Busaan maali, attamiin ittisuu dandeenya?
Busaan balaafamaadha jedhame addunyaatti yaaddoo ta'aa jira
Mallattoowwan dhukkubichaa yoo tarreessanis, guyyoota jalqabaa tokkoo fi lama keessatti qaama gubaa olaanaa fi boowoo mataa akkasumas qaama nyaataa kan qabu ta'usaa himanii dhukkubsattoonnis hospitaala Qabrii Dahaariitti wallaanamuun deebii'aa kjiru jedhan.
''Gabaasa hanga ammaati jiruun, namoonni 63 ta'an vaayirasichaan qabamuun gara mana yaalaa dhufanii wallaansa argataniiru,'' jedhaniiru itti gaafatamaan kun.
Wayita ammaa kanattis qormaanni biyyaalessaa kanamaa kan jiru waan ta'eef, barattoonni dhukkuba kanaan qabaman wallaansi duraa taasifameefii gara kutaalee qormaataatti deebii'unsaanii mirkanaa'eera jedhu.
Haala dhukkuba kanaatiin walqabatee namni miidhame akka hinjirree dubbatanii, dhukkubsattoonni hundu wallaansa argachuun gara mana isaanitti deebii'usaanii Dr Yusuf BBC'tti himan.
Dhukkubni kunis karaa bookee busaatiin nama dhukkubsataa irraa gara nama fayyaatti kan darbu yoo ta'u, aanga'oonni naannichaas bakkeewwan busaan itti walhortu balleessuuf sochii taasiuu irratti kan argaman ta'u himaniiru.
Haaluma walfakkaatunis tamsa'inni dhukkubichaa Dollo Aduu fi Dollo Baayaatti waggaa harraa umamee kan ture ta'u Dr Yusuf ni himu.
Busaa balaafamaadha jedhamee kibba baha Eeshiyaatti babalatee jira; Itoophiyaa hoo?
Guyyaa Busaa Addunyaa: Busaan maali, attamiin ittisuu dandeenya?